जानिराख्दा राम्रो: चोटपटकका कारण छालामा लागेको दाग कसरी हटाउने ? - CNN
December 15, 2020 December 15, 2020 कभर न्युज नेपालLeaveaComment on जानिराख्दा राम्रो: चोटपटकका कारण छालामा लागेको दाग कसरी हटाउने ?
अनुहार तथा छालामा बसेको दागकै कारण व्यक्तिको सौन्दर्यतामा समेत आँच आउने गर्दछ ।त्यसैले, पछिल्लो समय मानिसहरु यस्ता दाग हटाउन विभिन्न उपाय अपनाउने गर्दछ । विशेषगरी, लेजर ट्रिटमेन्ट, सर्जरीद्धारा पनि मानिसहरु यस्ता दाग हटाउन हरसम्भव प्रयास गर्दछन् । यस्ता प्रयास महँगो त हुन्छ नै, कम हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । जबकी केही घरेलु उपाय अपनाएरै पनि चोटका कारण लागेको यस्ता दाग प्राकृतिक रुपमै हटाउन सकिन्छ ।
कागती- शरीरमा भएको दाग मेटाउनका लागि कागतीको प्रयोग पनि राम्रो मानिन्छ । कागतीमा प्राकृतिक व्लिचिङ्ग गुण रहेको हुन्छ, जुन चोटका करण शरीरमा लागेको दाग कम गर्न सहायक मानिन्छ । तर कुनै पनि दागमा कागतीको प्रयोग गर्दा त्यसलाई सिधै घाउमा लगाउनु हुँदैन । कागतीको रसलाई कपासको सहायताले घाउमा लगाउनु पर्छ । यो प्रकृयालाई लगातार एक हप्तासम्म दोहर्‍याएको खण्डमा यो समस्या क्रमश कम हुँदै जान्छ ।
बेसार- बेसारमा प्राकृतिक व्लिचिङ्ग गुण हुन्छ, जसले घाउका कारण लागेको दाग कम गर्नमा मद्दत गर्छ । बेसारलाई मह वा दहीमा मिसाएर दागमा लगाउनु पर्छ । यति गरेमा यो दाग क्रमश कम हुँदै जान्छ ।
मह- महद्धारा पनि घाउको दागलाई सजिलै मेटाउन सकिन्छ । महमा कागतीको रस मिसाएर छिट्टै दाग कम हुने गर्छ ।
काक्रोँ- शरीरलाई स्वस्थ राख्न तथा छालालाई नरम बनाउन तथा शरीरलाई हाइड्रेट राख्न काक्रो लाभदायक मानिन्छ । काक्रोको पेस्टलाई नियमित रुपमा ठाउँमा लगाएको खण्डमा मात्र पनि घाउका कारण भएको दाग विस्तारै कम भएर जान्छ ।
चन्दन-चन्दन पनि अनुहारको लागि राम्रो मानिन्छ । चन्दनको पाउडरमा दुई चम्चा दूधको साथमा गुलाव जल मिसाएर त्यसको पेस्टलाई घाउमा लगाएर करिब एक घण्टा सुक्नको लागि छोड्नु पर्छ । अब यसलाई चिसो पानीले धुनु पर्छ । यो प्रकृया नियमति रुपमा अपनाएको खण्डमा अनुहारको दाग क्रमश कम हुँदै जान्छ ।
एलोभेरा-एलोभेरा जेल अनुहारका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । यो जेललाई राती सुत्नु अगाडी दाग भएको ठाउँमा लगाउनाले दागमा फाइदा हुन्छ ।
समर मेकअप टिप्स-छालाको दाग हटाउने उपाय त थाहा पायौं । अब गर्मीमा कसरी मेकअप गर्ने त्यसको पनि आधारभूत जानकारी यहाँ पेश गरिएको छ ।
May 21, 2020 June 7, 2020 कभर न्युज नेपाल